Забур 110 CARS - Nnwom 110 AKCB
1Awurade ka kyerɛɛ me Wura se,
bɛyɛ wʼanan ase ntiaso.”
2Awurade bɛterɛw wʼahempema dennen mu afi Sion;
na wubedi hene wɔ wʼatamfo so.
3Wʼasraafo beyi wɔn koma mu
da a wobɛkɔ ɔsa.
Tumi kronkron bɛyɛ wʼadurade
na wo mmabun bɛba wo nkyɛn
sɛnea obosu gugu anɔpahema.
“Woyɛ daapem sɔfo
sɛ Melkisedek sɛso.”
ɔbɛdwerɛw ahemfo wɔ nʼabufuwhyew da no.
6Obebu amanaman atɛn aboaboa awufo ano;
na wadwerɛw asodifo a wɔwɔ asase so nyinaa.
7Ɔbɛnom asuwa a ɛda ɔkwankyɛn mu nsu
enti obedi nkonim.
Ɔhene no bɛnom asuwa a ɛda ɔkwankyɛn mu nsu,
na wanya ahoɔden, na wagyina nkonimdi mu.
AKCB : Nnwom 110